I-Adobe AIR – isoftware ingeza ukusebenza kudivayisi. Isoftware inika amandla ukudala noma ukuqhuba izinhlelo zokusebenza ezikhiqizwe ngezilimi ezahlukahlukene zokuhlela.
Esidumile multimedia Umdlali ukusekelwa inala takhiwo. Isofthiwe Ukudlalwa amafayela emidya ngaphandle nokulahlekelwa quality futhi kwenza ukubuka ukusakaza ividiyo.
Isofthiwe for elawulwa kude computer ngokusebenzisa ekhethekile multi-touch liphathe uthumele amafayela zombili izinkomba.
Isicelo Elula wenkampani Valve ukulandelela сloseouts game. Isofthiwe ikuvumela ukuba lokhozi lokho imidlalo abangani bakho badlala uxoxe nabo izingosi zengevu.
Ifayela archiver enamandla ngekusitwa iningi archive takhiwo. Isofthiwe ine a amathuluzi anhlobonhlobo kanye nezici ukuqinisekisa umsebenzi elikhiqizayo archives.
I-Evernote – ithuluzi lokwakha amanothi noma uhlu oluhlukile. Isoftware isekela ukuvumelanisa ne-akhawunti yakho kanye nokufinyelela olwazini eligcinwe kumadivayisi ahlukile.
CCleaner – uhlelo lokusebenza olusebenziseka kalula lokuhlanza nokwandisa uhlelo lwedivayisi. Isoftware isekela amathuluzi amaningi ukuqapha isimo sohlelo futhi alungise iphutha.
Ithuluzi ukuqaphela amathrekhi omculo kanye abaculi. Isofthiwe isebenzisa microphone ukuze uqophe imithombo umsindo bese uqhathanisa izinsalela melody ne database isicelo.